Umhlahlandlela WeMakethe - IYunis International Ukuhweba Co, Ltd.
Umkhakha ohlukile wezohwebo weDolobha likazwelonke 1
Izigaba Zemboni: Amathoyizi ajwayelekile, amathoyizi we-inflatable, Amathoyizi e-Plush, Amathoyizi kagesi, ubucwebe, ubucwebe bezinwele, izesekeli zobucwebe, izesekeli zezimbali, ubuciko bokuhlobisa, ubuciko bezithombe, ubuciko bezokuvakasha, imbali.
Indawo yokuqala ihlanganiswa yi-District A, District B, District C, District D ne-District E, futhi inezitezi ezine. Le ndawo iyimakethe yezimbali ye-Yiwu Artificial flower kanye nemakethe yezitolo ze-Yiwu Artificial flower, imakethe yamathoyizi e-Yiwu, imakethe yamatshe ama-Yiwu ubucwebe, imakethe ye-Yiwu Hair accessories, imakethe ye-Yiwu Art & Crafts, imakethe ye-Yiwu Porcela nemakethe ye-Yiwu Souvenirs.
Okulandelayo yindawo yomkhiqizo ethile:
Isitezi sokuqala: Imbali yokwenziwa isesifundeni A naseSifundeni B; Izimbali zezinto zokwenziwa zise-District B.; ithoyizi likaPlush kanye namathoyizi e-inflatable akwi-District C.; ithoyizi lika-elekthronikhi lisesifundeni C nase-District D; Amathoyizi ajwayelekile aku-District D naseSifundeni u-E.
Isitezi Sesibili: Izesekeli Zezinwele sikwisifunda A, Isifunda B neSifunda C; Ubucwebe buseSifundeni C, esiFundeni D naseSifundeni u-E.
Isitezi Sesithathu: Ubuciko Bemishado & Ubuciko Kukwisifunda A; Ubuciko Bokuhlobisa & Ubuciko buseSifundeni A, esiFundeni B naseSifundeni D; I-Porcelain & Crystal iku-District D; Ubuciko bezohambo nezamakhwaya kuseDistri D; Uhlaka lwezithombe luku-District D naku-District E; Izinto zokuhlobisa ubucwebe zisesifundeni u-E.
Isigaba Sesine: I-Artificial Flower iseSifundeni A; Ubucwebe buseSifundeni A, esiFundeni B, esiFundeni C, esiFundeni D nakwa-District E; Ubuciko & Ubuciko kuse-District B, District C, District D nase-District E.
I-International Trade City (eMpumalanga), iDolobha Lezentengiselwano
Izigaba Zemboni: Iziteketiso nezikhwama, Izambulela, Izesekeli Ezizenzakalelayo, Izingubo Zemvula & Amaphakethe we-PLOY, Amathuluzi E-Hardware, I-Hardware & Kitchenware & Bath, Izikhiye, Amawashi namaawashi, Ukusebenza Kwasekhaya, Ithuluzi Likagesi, Izinsiza Zokuxhumana, Amathuluzi Nemishini.
Indawo yesibili ihlanganiswe neSifunda F neSifunda G futhi ibe nezigaba ezi-5. Indawo yesibili iyimakethe ye-Yiwu RAIN GEAR, imakethe ye-Yiwu Yodoti kanye namathuluzi, imakethe ye-Yiwu Lock, imakethe ye-Yiwu House Kaya Electronics, imakethe ye-Yiwu Metal Kitchenware, imakethe ye-Yiwu Watches kanye ne-Clock, imakethe ye-Yiwu Electronics.
Isitezi Sokuqala: IPoncho, Coat YeMvula kanye ne-Umbrella iseSifundeni F; Amapotimende nezikhwama kukhona esifundeni uF.
Isitezi Sesibili: Ilokhi iseSigodini F; Amathuluzi aku-District F; I-Hardware ise-District F nase-District G.
Isitezi Sesithathu: I-Metal Kitchenware iseSifundeni F; I-Household Electronics ikuSifunda F; Ezokuxhumana ziku-District G; Amawashi & Iwashi kuse-District G; Izinsimbi Zobuchwepheshe zikuSifunda G.
Isitezi Sesine: Igalari yomkhiqizo wesifunda likuSifunda F; Igalari yomkhiqizo we-Anhui Province isesifundeni F; Igalari yomkhiqizo e-Hongkong ise-District F; Igalari yomkhiqizo weSifundazwe saseSishuan iseSifundeni F; Igalari yomkhiqizo waseKorea ikuSifunda F; I-Hardware iseSigodini F kuya esifundeni G; Amapotimende nezikhwama kukhona ku-District G; Ama-elekhtronikhi akwiSifunda G; Ukubukwa & Iwashi kuseSigodini g.
Isitezi Sesihlanu: Isikhungo Sokuhweba Kwamanye Amazwe.
I-International Trade City District 3
I-Yiwu International Trade City, iSifunda 3 yindawo yokwakha yamamitha skwele angama-460,000. Isitezi esisodwa kuya kwesithathu sinezimitha eziyi-6,000 zamamitha ayi-14. Amakamelo amane kuya kwayisihlanu anezikhala ezingaphezu kwama-600 ezinamamitha-skwele angama-80-100. Isitezi sesine senzelwe ukukhiqizwa kwesikhungo sokukhangisa ngqo.
Izigaba Zemboni: Izinkinobho, ama-Zipper, ama-Glass, ama-cosmetmet, amapeni & i-Ink & Iphepha, Imibhalo yehhovisi kanye nezinto zokubhala, izihloko zezemidlalo, okwezemidlalo, ezempahla.
I-Yiwu Futian Market Area Three ihlanganisa imakethe yezinto zokubhala ze-Yiwu, imakethi yeglasi ye-Yiwu, imakethe yento ye-Yiwu, imakethe yehhovisi le-Yiwu, izimonyo ze-Yiwu kanye nemakethe yokungena kwezimonyo, ubuhle be-Yiwu uqobo nemakethe yokunakekela, inkinombo ye-Yiwu & imakethe ye-zipper, imakethe yezingubo ze-Yiwu imakethe yokuhlobisa yokudweba yokuhlobisa.
Okulandelayo indawo ekhethekile yemikhiqizo:
Isitezi Sokuqala: Zonke izinhlobo zoPeni, uyinki, imikhiqizo yamaphepha nezibuko.
Isitezi Sesibili: Zonke izinhlobo zokubhala, izinto zehhovisi, ezemidlalo nezinto zokungcebeleka.
Isitezi Sesithathu: Zonke izinhlobo zezimonyo nezimonyo zokufakelwa kwezimonyo, ubuhle kanye nokunakekelwa komuntu siqu, izibuko namakhomu, inkinobho & ne-zipper nezinto zokugqoka.
Isitezi Sesine: amafektri wezimonyo nobuhle bomuntu siqu & nokunakekela, amafektri emidlalo nawangaphandle, amafektri wezinto zokugqoka.
Isitezi Sesihlanu: ukuhlobisa umdwebo nokuhlobisa imidwebo yokuhlobisa.
I-International Trade City District District 4
Isifunda sase-Yiwu International Trade City District 4 savulwa ngokusemthethweni ngo-Okthoba 21, 2008. Indawo yokwakhiwa kwemakethe ingamamitha-skwele ayizigidi eziyi-1,8, kanti amabhizinisi angaphezu kuka-16,000 aqashiswa ngamabhizinisi amabhizinisi angaphezu kuka-19,000.
Izigaba Zemboni: Izidingo Zansuku zonke, Izindatshana Zekotoni (kufaka phakathi i-Bra, Underwear, Scarves, Gloves, Hats kanye nezinye izindwangu ezihlanganisiwe zikotini), Izicucu Zezinyawo (kubandakanya amabhande), i-Knitwear (hosiery), amaNtende, amathawula, uboya, i-Lace.
I-Yiwu Futian Market Area Area yesine ifaka imakethe yamasokisi e-Yiwu nemakethe ye-leggings, imakethe yasendlini ye-Yiwu, imakethe yesigqoko se-Yiwu, imakethe yezimpahla zohlobo lwe-Yiwu, imakethe yohlobo lwe-Yiwu, imakethe yezicucu ze-Yiwu, imakethe yethawula le-Yiwu, imakethe yesikebhe se-Yiwu. Uhlaka lwe-Yiwu nemakethe yokungena yozimele kanye nesikhungo sokuhamba se-Yiwu.
Isitezi sokuqala: Zonke izinhlobo zamasokisi nama-leggings.
Isitezi Sesibili: Zonke izinhlobo zezinto zasendlini, izimpahla ezihlanganisiwe nezakotini, izigqoko, amagilavu, izindlebe.
Isitezi Sesithathu: Zonke izinhlobo zoboya bokubopha, amathayi, amathawula, izicathulo. Isitezi Sesine: Zonke izinhlobo zamabhande nokufakwa kwebhande, okungaphansi kwezinto, izikhafu nama-leggings.
Isitezi Sesihlanu: Isikhungo sokuhamba se-Yiwu, indwangu, izicathulo, indlu (i-ceramic evela eChaozhou), ifreyimu nokufakwa kwezinto ngohlaka kanye nokudweba.
Isifunda 5 sihlanganisa indawo engamahektare angama-266,2, indawo yokwakha yamamitha-skwele angama-640,000, ukutshala imali okuyi-1.42 billion yuan (eduze nezigidi ezingama-221,5 zamadola), izingqimba ezinhlanu zomhlaba, ezimbili ezingaphansi komhlaba, ezinezitezi zebhizinisi ezingaphezu kuka-7,000.
ISifunda 5 esisanda kwakhiwa senzelwe imikhiqizo engeniswa ezweni kuphela, okokulala namakhethini, izindwangu, izesekeli zezimoto nezithuthuthu.
I-Yiwu Futian Market Area yesihlanu ifaka phakathi imakethe yokudla engeniswa kwamanye amazwe, imakethi yemikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo, imakethe yezindwangu engeniswa ezweni, Imakethe yezobuciko engenisiwe, Isikhungo sombukiso wase-Afrika, imakethe yokulala, imakethe yempahla yomshado, imakethe yewig, imakethe yejika , imakethe yezitolo ezifuywayo.
Isitezi sokuqala: Zonke izinhlobo zokudla okungeniswa ezweni, imikhiqizo yokunakekelwa kwempilo, izindwangu ezingeniswa ezweni, ubuciko kanye nezobuciko, izikhungo zemibukiso zase-Afrika nezinye izinto ezingenisiwe.
Isitezi Sesibili: Zonke izinhlobo zokulala, izimpahla zomshado kanye nama-wigs. Isitezi Sesithathu: Zonke izinhlobo zamakhethini, izinto zokwenziwa ezihlanganisiwe nempahla yomshado.
Isitezi Esine: Zonke izinhlobo zezinto zemoto, izingxenye zezithuthuthu nezinto ezifuywayo.